History of 2000 donation group | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » History of 2000 donation group
History of 2000 donation group
Posted by padonmar on Jun 27, 2011 in Buddhism | 12 comments
မိုးစက် မိုးပေါက် ကလေးများ မှ သည်…….
ဒီကနေ့ ရန်ကုန် သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဖွင့်ပွဲ နဲ့ အလှူ ရေစက်ချ အခန်းအနားကို ရောက်ပါတယ်..။
နှစ်ထောင် အဖွဲ့ အနေ နဲ့ပါ…။
ကျမ တို့ ၂၀၀၀ အဖွဲ့ ရဲ့ လစဉ် ပုံမှန် လှူနေကျ အလှူ တွေ ထဲမှာ .. သီတဂူ အလှူတော် က နံပါတ် (၁) ထိပ်ဆုံးကပေါ့..။ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာလ က စပြီး လစဉ် လှူခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၅၇ ကြိမ် မြောက်ခဲ့ပါပြီ..။ သီတဂူ လုပ်ငန်းကြီး (၃) ရပ် ဖြစ်တဲ့ သီတဂူ ရေအလှူတော်၊ သီတဂူဆေးရုံ နဲ့ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွေ အတွက် လစဉ် တစ်လှည့်စီ လှူခဲ့ တာပါ..။
အဲဒီ သီတဂူ အလှူတော်.. စပြီး လှူ ဖြစ်ခဲ့ တာကတော့ .. အဓိက အကြောင်းရင်းခံ က ကျမရဲ့ သားကြီး လင်းထက်ဦး (ခ) စာကလေး ကြောင့်ပါ..။ (ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒ က သူ့ကို စာကလေး… လို့ ခေါ်တာမို့ Nick name ဖြစ်သော်လည်း.. အဲဒီ စာကလေး ဆိုတဲ့ နာမည် ကို သူ အလွန် မြတ်နိုးပါတယ်..)
ကျမ သားကြီး လင်းထက်ဦး က ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒ ဆီမှာ လူငယ်ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်း (မှော်ဘီ) တက်ပြီး.. ၂၀၀၅ ခုနှစ် ၀ါခေါင်လ မှာ ဆရာတော်နဲ့ အတူ စစ်ကိုင်း သောတာပန် ဆီအလှူ ကို လိုက်သွားပါတယ်..။ အဲဒီက ပြန်လာ တော့ သားကြီးက
“မေမေရေ.. သားတို့ စစ်ကိုင်းက သီတဂူ ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ ကျောင်းမှာ တစ်ည တည်းကြတယ်..။ ဆရာတော်ကြီးဆီက သြ၀ါဒ ခံ ကြပြီး ဆရာတော်ကြီး က စာအုပ် တစ်အုပ်စီ ပေးလိုက်တယ်.. မေမေ..”
ကျမကြည့်လိုက်တော့ အဲဒါ သီတဂူ လုပ်ငန်းကြီး သုံးရပ်ဖြစ်တဲ့ သီတဂူ ရေအလှူ စီမံကိန်း၊ သီတဂူဆေးရုံ နဲ့ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွေ တည်ဆောက်ခဲ့ပုံ၊ ကုန်ကျစရိတ် နဲ့ လစဉ် ကုန်ကျငွေ တွေ ကို ရှင်းပြထားတာပါ..။ ကျမလေ.. အဲဒီ စာအုပ် ကို ဖတ်ပြီးတော့ .. တစ်ကယ်ကိုဘဲ.. လစဉ်.. သိန်းဂဏန်း.. လှူနိုင်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ.. တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လာ ပါ တယ်..။ ဒါပေမဲ့ .. ခါချဉ်ကောင် မာန်ကြီးပါသော်လည်း… ခါးက မသန် သမို့ .. စာအုပ်ကလေး တစ်ကိုင်ကိုင် နဲ့ “မေမေလှူချင်လိုက်တာ.. သားရယ်.”. လို့ တဖွဖွ ပြောရင်း … တစ်နှစ် ကူးသွားပါတယ်..။
ကျမ က မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားပေမဲ့ .. ဒင်းက၊ စာကလေး က (ကျမသားကြီးက) မနေပါဘူး …။ ဟော.. ၂၀၀၆ ခုနှစ် ၀ါခေါင်လ မှာ ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒ နဲ့ စစ်ကိုင်း သောတာပန် ဆီအလှူ ကို လိုက်သွားပြန်ပါရော …။ ပြန်လာတော့ သီတဂူ လုပ်ငန်းကြီး သုံးရပ် စာအုပ်က ပါလာပြန်ပါရော..။ ပြီးတော့ ကျမ ကို ပေးပြန်ပါရော…ရှင်..။ ကျမကလဲ ဖတ်ပြီးတော့ တစ်ခါ လှူချင်တဲ့ စိတ်တွေ.. တဖွားဖွား ပေါ်လာ ပြန်ပါရော…။ ဒါနဲ့ အဲဒီ အချိန်မှာတော့ ကျမက လှူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို စဉ်းစား တဲ့ အခါမှာ .. ကျမတစ်ယောက်ထဲတော့.. များများ လဲ မလှူနိုင်ဘူး.. ။ လစဉ်လဲ မလှူနိုင်ဘူး..။ ဒီတော့ လစဉ်လဲ လှူ နိုင်အောင်.. ၊ မပင် မပန်း လဲ လှူနိုင်အောင်လို့ .. လူအများ စုပြီး လှူကြရင်တော့ လှူနိုင်ကောင်း ရဲ့ လို့ တွေးမိပြီး .. မိတ်ဆွေ များကို စ ပြီး .. ဆွေးနွေးကြည့်တော့ မေးမိတဲ့ သူတွေ အားလုံးက လိုလိုလားလား.. လက်ခံကြတာမို့.. တစ်လ ကို တစ်ယောက် ၂၀၀၀ ကျပ် နှုံး နဲ့ လစဉ် လှူကြဖို့ အဆင်ပြေ သွားပါတယ်..။ ပထမ ဆုံး သီတဂူ ရေအလှူတော် မှာ အလှူရှင် ၃၇ ယောက် ရှိပြီး၊ ကျပ်ငွေ . . ၇၀၀၀၀ (ခုနှစ်သောင်း) လှူနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ သီတဂူ ရေအလှူတော် တရားပွဲ မှာ သွားလှူတော့.
“အလှူရှင် နာမည် ပြောပါ….”
လို့ မေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ .. ကျမ ရုတ်တရက် ဘာဖြေရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားပါတယ်..။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ .. ဒီအလှူငွေ တွေက တစ်ဦးတစ်ယောက် ထဲက လှူထားတာမှ မဟုတ်တာလေ၊ ဘယ်သူ့ နာမည်ကို ပြောရမှာ လဲ..။ ကျမ လဲ ၂၀၀၀ ကျပ် စီ စုလှူတာပါ.. လို့ ပြောချင်တာ.. ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ နောက်မှာ လဲ.. အလှူရှင် တွေက ရှိသေးတာမို့ ကျမကြောင့် ကြာသွားမှလဲ.. စိုးတာမို့ .. ရုတ်တရက် ..
“နှစ်ထောင် အဖွဲ့ … ကပါ.. ဘုရား …” လို့ ဖြေလိုက်မိပါတယ်..။
အဲဒီ အရင် က ကျမတို့ တစ်ချို့ အလှူတွေ၊ စုပြီးလုပ်နေကြပေမဲ့ အဖွဲ့ အမည် ရယ် လို့ အတည်တကျ ပေးမထားခဲ့ပါဘူး..။
အလှူဖြတ်ပိုင်းကို scan ဖတ်ပြီး email နဲ့ ပို့ပေးတော့ .. အလှူရှင် တွေက ..
“အမယ်.. နှစ်ထောင် အဖွဲ့.. ဆိုပါလား.. အမ .. ဒီနာမည် ကောင်းတယ်.. ကျနော်တို့ နဲ့ ကွက်တိဘဲ .. ” ဆိုတာ က တစ်ကြောင်း၊ ကျမတို့ကလဲ .. ၂၀၀၀ စီ စုလှူကြတာမို့ ကိုက်ညီတာကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ရွှေတိဂုံ ဘုရားက ၂ပြား တန်ဆောင်း ကို အားကျ တာကြောင့် တစ်ကြောင်း .. နောက်ပိုင်းမှာ အလှူ ကိစ္စ နဲ့ ပရဟိတ အလုပ်တွေမှာ.. ဒီ နာမည် ကိုဘဲ.. သုံးဖြစ်သွားတာပါ..။
ဒါကြောင့် သီတဂူ အလှူသည်.. ကျမတို့ ၂၀၀၀ အဖွဲ့ ရဲ့ အမည်တွင်ရာ.. ပဓါန အလှူဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီကနေ့ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဖွင့်ပွဲ နဲ့ အလှူ ရေစက်ချ အခန်းအနား မှာ ရန်ကုန် သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ၃ ထပ် ကျောင်းဆောင် အလှူရှင်တွေသာ မကဘဲ..၊ သီတဂူ လုပ်ငန်းတွေမှာ အလှူထည့်ဝင်ကြတဲ့ အလှူရှင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်း တွေ အားလုံး.. ကို ဆရာတော်ကြီးက ဂုဏ်ပြုလွှာ တွေ ပေးတာပါ..။
ဒီ ရန်ကုန် သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ၃ ထပ်ကျောင်းဆောင် မှာ ကျမတို့ ၂၀၀၀ အဖွဲ့ရဲ့ အလှူ ကျပ် သိန်း ၄၀ ပါ ပါတယ်..။ ကျမတို့ ၂၀၀၀ အဖွဲ့ က လစဉ် သီတဂူ လုပ်ငန်းတွေ မှာ လှူခဲ့ တာဟာ..
အခုဆိုရင် ၅၇ ကြိမ် မြောက်ခဲ့ပြီး ၁၀၄၆၇၀၀၀ ကျပ် (ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၀၄ သိန်း) ကျော်ခဲ့ပါပြီ..။
နာဂစ် ဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းခဲ့စဉ် ကလဲ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ကွမ်းသီးချောင်းရွာ၊ သီတဂူ ကျောင်းက တစ်ဆင့် လှုခဲ့တာ .. (၁၇-၅-၂၀၀၈) မှာ ၂၈၃၀၀၀၀ ကျပ် (ကျပ် သိန်းပေါင်း ၂၈ သိန်း) နဲ့ ၂၀၁၀ နွေရာသီ ရေရှားပါးမှု မှာ ရေအလှူ တော် ၃၆၅၀၀၀ ကျပ် (သုံးသိန်းခြောက်သောင်း ငါးထောင်) သီတဂူ အဖွဲ့က တဆင့် လှူဒါန်း ခဲ့ပါသေးတယ်..။
ဒါကြောင့် ကျမတို့ ၂၀၀၀ အဖွဲ့ အနေ နဲ့ သီတဂူ အလှူတော် ကောင်းမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ စုစုပေါင်း ၁၃၅ သိန်းကျော် ခဲ့ပါပြီ..။
အခုဆိုရင် .. သီတဂူ အလှူတော် ကို လစဉ် ၂ သိန်းခွဲ ခန့် လှူနိုင်ပြီး၊ အလှူရှင် ၁၂၀ ဦးခန့်ရှိပါတယ်..။ လစဉ် ၂၀၀၀ ကျပ် စီ ဘဲ ထည့်ရတာမို့ မပင်မပန်း လှူနိုင်ကြပါတယ်..။
မိုးစက် မိုးပေါက် ကလေးများ မှ သည်……. သမုဒ္ဒရာကြီး ပြည့်လျှံရသကဲ့သို့ ….
ကျမတို့ ရဲ့ လစဉ် ၂၀၀၀ ကျပ် အလှူ ငွေ မှ.. သိန်း ရာချီသည် အထိ လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း.. ၂၀၀၀ အဖွဲ့မှ သီတဂူ အလှူရှင်များကို .. သတင်းကောင်းပါး ရင်း.. မိမိတို့ရဲ့ ဒါနအစုစု ကို .. သာဓု .. သာဓု .. သာဓု .. ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကြောင်း မျှဝေလိုက်ရပါတယ်.. ရှင်..။
၂၀၀၀ အဖွဲ့ ၀င် အလှူရှင်များ ၊ မိသားစုများ နှင့် တကွ၊ အနန္တ စကြာင်္ဝဠာ ရှိ မြင်အပ်၊ မမြင်အပ် နတ်၊ လူ၊ သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့ အားလုံး ကို … ထိုကုသိုလ် အစုစု တို့ အတွက်..
အမျှ.. အမျှ.. အမျှ .. ယူတော်မူကြပါကုန်တော့ ….။
သာဓု .. သာဓု .. သာဓု . . ။
ဓါတ်ပုံတွေက ဒီ Link မှာပါ..။
DO A SMALL THING WITH GREAT HEART!
With Thidagu Sayadaw
သိန်း ၅၀ ပြည့် အလှူ ၁၅-၈-၀၉
သိန်း ၁၀၀ ကျော် လှူနိုင်ခဲ့တဲ့ပီတိလေး မိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေပေးချင်လို့ပါ။
ကျေးဇူပါ မမရေ – မမဒေါ်မေအေးဦးနဲ့ မေ(၃၀)၇က်ကတွေ့ခဲ့ပြီး လို. မမအကြောင်းတောင်နဲနဲပြောပြပါသေးတယ်
ပင်လယ်ထဲကို မိုးကြီး သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာချပေမယ့် ဘာမှ မသိသာဘူး။ အကျိုးမထူးဘူး။ ဒါပေမယ့် မိုးခေါင်ရေရှား အရပ်မှာ မိုးလေး တစ်စက်နှစ်စက် ရွာတာက အများကြီး အကျိုးရှိသလိုပါပဲ လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ခုလို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်တာ အကျိုးများလှပါတယ်။ အလှူကို သာဓု ခေါ်ပြီး မျှဝေယူသွားပြီနော်။
ှShwe Ni ရေ ၊မေအေးဦးနဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုတော့ 2000 ရဲ့ အလှူရှင်စာရင်းမှာ ပါခဲ့ပြီပေါ့နော်။
Ma Ma မန့်သလိုဘဲ ရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာ လိုက်ရွာပေးဘို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
ရေပေါက်ရေစက်ကြိမ်ကြိမ်သက် ထဲနက်ကျယ်ဝန်းပင်လယ်ထွန်း၏။ သာဓု၊ သာဓု၊သာဓု။
သာဓု.သာဓု.သာဓု ပါခင်ဗျာ။ DO A SMALL THING WITH GREAT HEART! ဒီစာကြောင်းလေးကိုလွန်စွာနှစ်သက်မိပါတယ်။
မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ…ဆိုသလို ရှိရက်နဲ့ မလှူရက်တဲ့သူတွေလဲ လောကမှာရှိကြပါတယ်။ကျနော်ဒီကနေ 2000GROUP သို့တိုက်ရိုက်လှူတန်းလိုပါတယ်။လိပ်စာ ဖေါ်ပြပေးနိုင်လျှင်ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ..။
လစဉ် ၂၀၀၀ လှူလို့ ရတယ်ဆိုတာလေး ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ လှူလို့ရမလဲမသိဘူး
လိုက်ကောက်တာလား တနေရာကို လစဉ်ကိုယ်တိုင်သွားလှူရတာလား
သာဓု ..သာဓု …. သာဓုပါ မိုးနည်းတဲ့နေရာတွေကို အခုလို အကြီမ်ကြိမ်ရွာသွန်းနိုင်ပါစေ
2000 ရဲ့ အလှူရှင်စာရင်းမှာလဲ ပါဝင်ချင်ပါတယ် အန်တီပဒုမ္မာရေ……
အလှူ့ရှင်များအားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ အောက်ပါ မေးလ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး နီးစပ်တဲ့နေရာမှာ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ကော်နက်ရှင်အခက်အခဲတွေကြောင့် မူလ စာတင်သူ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ဖြေကြားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် … ကျွန်မလဲ လှူချင်ပါတယ် … ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်ပါအုန်းမယ် ….
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာက ခေါ်နေတဲ့ project help burma ရံပုံငွေအလှူခံလျောက်လွှာ ကြော်ငြာကို မိုးမခဆိုက်မှာတွေ့လို့ပါ။
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာက Project Help Burma က ပြည်တွင်းကူညီမှု လျှောက်လွှာခေါ်နေပြီ
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၁
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ပြီး ဈေးရောင်းပွဲများလုပ်၍ ရန်ပုံငွေရှာနေတဲ့ Project Help Burma မြန်မာလူမှုရေးကူညီမှု ရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ၂၀၁၁ အတွက် မြန်မာပြည်တွင်းက အလှူခံလျှောက်လွှာများကို လက်ခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ ဒါက ဒုတိယအကြိမ် ကူညီမှုလျှောက်လွှာများကူညီခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ကတကြိမ်၊ ၂၀၁၀ ယမန်နှစ်မှာ တကြိမ် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ ဈေးရောင်းပွဲများ ကျင်းပပြီး အလှူငွေ စုဆောင်းလို့ မြန်မာပြည်တွင်းက လျှောက်ထားလာသူ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အမျိူးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ကူညီမှုတွေကို လက်ခံစိစစ်ပြီး ထောက်ပံ့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲသည်အဖွဲ့ကို ဘေးဧရိယာက လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး စိတ်ဝင်စား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချို့က ကိုယ်ထူကိုယ်ထစုစည်းတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သည်နေရာမှာ လျှောက်လွှာတွေ ခေါ်ယူနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်တွင်းက လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။